Plọ ọrụ PROFILE - Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
Mgbanwe eriri eriri
Single Side Imitomi
Ugboro abụọ Side Emitting
Ihe Nlekọta 360 Degree
Ikuku 1st Generation Strips
Ikuku 2nd Generation Strips
Mgbanwe eriri na-agbanwe agbanwe (IP20)
Soft Neon ibe (IP65)
Ihe njikwa RGB
Onye ọrụ / OEM / ODM
Zhongshan Joineonlux Co., LTD e guzobere na 2003. Ruo afọ 17, Joineonlux emeela nnukwu ibu na-adabere na nlebara anya dị ukwuu na usoro mmepụta ihe. Joineonlux mgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị na nnọgidesi ike na-enweghị mgbagha, abanyela na nnukwu ọrụ nka na ikike nke ụwa, Joineonlux nwere ike ịrapagidesi ike na nzụpụta sayensị na teknụzụ na azụmaahịa azụmaahịa dị mkpa, ụlọ ọrụ anyị na-enye onyinye iji belata okpomoku zuru ụwa ọnụ site na ijikọta teknụzụ kachasị ọhụrụ n'ime ọkụ ọkụ na ngwaahịa na ihe ọkụ ọkụ, n'otu oge, Anyị bụ ndị na mmepụta na ahịa dị ka otu n'ime mba hightech enterprise.
Ọ gafere CE, RoHS, TUV ... wdg na asambodo ụlọ na nke mba ọzọ, ma gafere usoro asambodo ISO9001, ọ bụghị naanị nwere klaasị mbụ nke akpaaka nke ndị R & D, akụrụngwa akụrụngwa na ikike ikike onwe onye ọgụgụ isi, kamakwa Ikanam warara ìhè qulity mba ọkọlọtọ drafting unit, mba elu tech ụlọ ọrụ.
Enwere ndị ọrụ karịrị 100, gụnyere ndị ọrụ nchịkwa gụrụ akwụkwọ nke 20. Anyị na-elekwasị anya na-eme nnyocha na-emepe emepe, n'ire. Enwere igwe SMT dị elu 9, 9 igwe na-ere ihe, 6 ndị na-ebupụta ihe, 7 ndị na-ere ahịa. Ike imepụta ihe karịrị mita 2.000,000 kwa ọnwa. Anyị na-eme ike anyị niile iji hụ na afọ ojuju kachasị ndị ahịa site na ịtọ ụtọ na ibute ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa asọmpi. Ndị otu anyị nọ ebe a ịje ozi na ebumnuche ịnye gị ọrụ kacha mma.
Ebumnuche anyị ịmepụta uru maka ndị ahịa, anyị ga-anwa ike anyị niile iji nweta mmeri-mmeri, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko egbula ịkpọtụrụ anyị, dịka onye ọrụ ọkachamara nke mbụ dugara ọkụ ọkụ ọkụ, ihe karịrị afọ 17, Joineonlux kere nnukwu ibu na ndabere nke usoro mmepụta. Na unremitting mgbalị, anyị mepụtara n'ime a elu-tech talent na mmepụta ike nke ụwa factory, Anyị na-anabata n'ụwa nile ahịa kpọtụrụ anyị maka azụmahịa mkparita uka.
Tinye adreesị email gị iji nweta ihe ngosi Ọhụrụ na nke ọhụrụ.